Ogaden News Agency (ONA) – Waftiga SCF Ee Dirdhabe oo Lakulmay Ugaaska Oromia.
Waftiga SCF Ee Dirdhabe oo Lakulmay Ugaaska Oromia.
Posted by Dulmane	/ September 5, 2018
Waftiga Isbahaysiga Soomaaliyeed ee Xoriyada SCF ee kusugan magaalada Dirdhabe ayaa kulan muhiim ah layeeshay Ugaaska guud ee Beesha Oromada Ugaas Cabdimaalig Yuusuf.
Waftiga SCF oo uu hogaaminayay Mudane Xuseen Maxamed Nuur ayaa casuumad rasmi ah kahelay Ugaaska Beesha Oromada Ugaas Cabdimaalig, kaas oo codsaday in ay wada kulmaan waftiga SCF.
Labada dhinac ayaa isbarasho iyo is nabdaadin kadib gudagalay arimo muhiim ah oo dan u ah labada shacab ee walaalaha ah ee Oromada iyo Soomaalida, kuwaas oo mudooyinkii udambeeyay lakala dhex dhigay colaad.
Waftiga Isbahaysiga Xoriyada Soomaaliyeed ayaa ugu horaynba Ugaaska iyo odayaashii lajoogay umuujiyay niyad wanaag iyo in nabad lagusoo dabaalo dhamaan xuduuda Soomaalida iyo Oromada, waxayna waftigu sheegeen in ay arintaas kashaqaynayaan hadii Alle idmo.
Ugaaska beesha Oromo Ugaas Cabdimaalig Yuusuf oo hadalka qaatay ayaa sheegay in uu kufaraxsan yahay kulankan taariikhiga ah, wuxuuna ugaasku tilmaamay walaaltinimada kadhaxaysa Soomaali iyo Oromo.
Ugaas Cabdimaalig oo hadalkiisa siiwatay ayaa sheegay in uu kashaqayn doono sidii nabad waarta looga gaadhi lahaa labada shacab ee Soomaalida iyo Oromada isla markaana uu raadin doono walaaltinimadii labada shacab.
Labada dhinac ayaa isla qiray in colaada labada shacab u dhaxaysa ay ahayd mid gacan kusamays ah oo labada shacab aysan dooranin colaada, waxayna isla sheegeen in loobaahan yahay kashaqaynta midnimada iyo nabada.
Gabagabadii kulanka labada dhinac oo ahaa mid muhiim ah ayaa kusoo dhamaaday sinabad ah, waxaana lagu soo kala tagay wajiyo fatxad leh.